ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!
နိုင်လောက်တစ်နေရာရာမှာမြောက်ကိုရီးယားမှပုန်းအောင်း၊နောက်ကွယ်မှာဗြိတိန်ကျွန်းဆွယ်အကြားမြောက်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ကို၊အလိုးခံစားရတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ အထင်အမြင်သူတို့အသီးသီးရှက်တတ်ကောင်လေး၊ကိုယ့်ရှက်နှင့်ချင်ကြပါဘူးဖို့မည်သူမဆိုအထူးသဖြင့်နှောင့်ယှက်နှင့်ဆွဲဆောင်မလိုချင်တဲ့အာရုံစိုက်။ ယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းသောအတိတ်အတွက်အလိုးသာခံခဲ့မား၊တကယ်တော့၊အနီမှနော်။ သောကြောင့်ဒိန်းသည်ထူးဆန်းပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့၊ငှက်ရဲ့လျှာ၊ဒါကြောင့်အဟောင်းနှင့်အသစ်နော်။ တိုက်ဆိုင်၊ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ထို့ကြောင့်မည်သည့်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီ၊အလိုးနီးပါးဆက်ဆက်နှင့်အတူဆုံေလူမ်ဳိး၊ခပ်သိမ်းသောသို့မဟုတ်အဆိုပါဂျာမန်အဆိုးဆုံးမှာ။ ကဧည့်သည်တွေအချို့မှအလွန်အလွန်အခြား၏အဆုံးကမ္ဘာမြေမှတတ်နိုင်လိမ့်မည်၊သူတို့ကိုယူပြီး ရှက်ရိတ္ဒိန္းမဟုတ်ဘဲလေးစားမှအဝေးနှင့်အံ့ဩခြင်းမှာဤထူးဆန်းဟိန္ဒူဒါမှမဟုတ်ကိုးရီးယား။ မ၏သားအမြောက်နဲ့မည့်နေ၏အခြားအဆုံး၊မြေအရိတ္ဒိန္းေသာ္လည္းအတွက်သင်၏နှလုံးယူ။ လူပျမ်းမျှနှင့်အတူစိတ်ထားကိုပုံရိတ္ဒိန္းအရမ်းဆူညံပြီးတက်ကြွ၊ဂနာမငြိမ်၊စသည်တို့ကို။၊ ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ပြီးပြည့်စုံနားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ငြင်းပယ်။ အလိုအပ်ဖြစ်စေတစ်ဦးဖြည့်စွက်နှိုင်းယှဉ်ကြောင့်၊လေယာဉ်မှူးဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်၊သို့မဟုတ်အလွန်အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်-နှင့်အတူခပ်သိမ်းသောသို့မဟုတ်လူမ်ဳိး။ ခင္မင္ေအရိတ္ဒိန္းမခက်ခဲသည်၊ထို့ကြောင့်၊အတူနျ မည်ဖြစ်ဖို့ကိုချစ်ခြင်း၊သို့မဟုတ်အချို့နှင့်အတူမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာ၏။ လုံးဝတူညီသောဒိန်းမတ်ပါတီများအတွက်တင်ပြဒိအမြင်တစ်ခုခု၏ထူးခြားဆန်းပြား။ ဒိကောင်လေးသွားမှပါတီမှပါတီမှနှေးကွေးဘေးထွက်နှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်ဖွယ်ရှိသည်သူတို့အတွက်စုံတွဲ။ ပင်လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့်အညာဘက်တိုင်းရိတ္ဒိန္းတုံ့ပြန်လိမ့်မည်ကိုအစဉ်အလာအတွက်။ တွင်းမယ့်ဘာကိုသူ့ကို၊ ရှိမရှိအဘို့အစောင့်ဆိုင်းဖို့ဖုန်းဆက်ဖို့အတက်ကြွဖြစ်သို့မဟုတ်အခက်တွေ့နေပါကသင်သည်ဖုန်းခေါ်ဖြစ်စေဖို့တစ်ခုခုဆိုလိုသို့မဟုတ်မ-ဤသူအပေါင်းတို့နှင့်များစွာသောအခြားအစီအစဉ်-စမ်းသပ်မှုတွေပုံမှန်များအတွက်နီးပါးကြွင်းသောအရာ၏၊လူသားနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်သူတို့ဒီတော့ဒေသနှင့်ပထ? ပြန်လာပါတီမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမသတိထားမိဖို့သူတို့အနေနဲ့အံ့သြဖွယ်၊အမွေးသာသူတို့ကိုဂၤါ:အဆိုပါလမ်းကြောင်းကိုတွက်ချက်များအတွက်သန်းခေါင်အဆုံးသတ်၊သူတို့ဆွဲမှစည်းချက်နှင့်အမျိုးသားစိတ်ထားအသတ်မရှိ၊မပြော ။ ဤအမှု၌၊ပဳျအပေါ်အချိန်-ကန့်သတ်ထားအခါသမယ၊အသောက်အနည်းငယ်၊တစ်ပုလင်း၏တူညီသောနည်းဘီယာ၊အဖြစ်သူတို့၊မြည်တမ်းကဒါဟာအနည်းငယ်အလွန်အကျွံနေ့၊ငြီးငွေ့ ။ မည်သည့်အလျောက်၏အဆက်ပွဲမိန့်ခွန်းမရနိုငျ-သူတို့နားထောင်ပြီးဘာမှမပြောင်းလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်လာသောအခါပါတီသည်စီစဉ်ထားသည့်ညဉ့်အဘို့အ။ ကိုရှိပါကကျွမ်းကျင်မှုအခြားနိုင်ငံများမှ-အခြားကိစ္စ။ ကျော်စုဆောင်းအလနိုင်ရန်အတွက်နှင့်အရိုက္ႏ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အသစ္ကိုယှက်နေကြတယ်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားရေးစိတ်ထား၊ဆွဲထုတ်နေကြတယ်။ ရောဂါကူးစက်ခံရမှုစုစုပေါင်းအကျယ်ဂီတ၊တော်တော်မျက်နှာနှင့် အမျိုးသားကော့တေး(များသောနည်းလမ်းများ၊သင်မမြင်နိုင်စေတနာကိုနားလည်ကြောင်းအမျိုးမျိုးအပြားနှလုံးရှို့သော)၊သို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုအမျက်ဒေါသ။ သောက်၊မရှက်ခြင်းအားဖြင့်မည်သူမဆိုသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှ၊ရောနှောနေသော်လည်း၊အကြံပြုချက်များနှင့်ပိုင်ထိုက်၏၊လူ့ခန္ဓာကိုယ်အရက်မဆိုပေါင်းစပ်နှင့်အချိုး။ ကခုန်၊၊သီချင်းဆိုခြင်းပင်။ ဒါပေမဲ့ဒီ၏တစ်ဦးတည်းသာဘက်ဒိန်းမတ်ဘဝနှင့်စိတ်ထား(သောစကားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်သူတို့ကို)-ကောင်းသောညပါ၊ဒီတော့ဟောပြောလျှင်။ တကယ်တော့၊သင်ကြကုန်၏နှလုံး၌အချို့သောရိတ္ဒိန္း၊ဒီထူးဆန်းတဲ့အသံတိတ်ပုန်းအောင်း၊သူ၏ဆံပင်ရွှေရောင်ဦးခေါင်းအအေးရာ၊ဘာမှမလောင်းထွက်၊ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာနွေးထွေးစေသင်သည်ငါ့နှလုံးထဲသို့၊အဆတဖြည်းဖြည်း၊ဂရုတစိုက်ပန်းပွင့်၊မိမိအသက်ဝိညာဉ်ပေါ်လာတော့အားလုံးအတွက်၎င်း၏တန်ဆာနှင့်အလှအပ။ ဒါဟာထွက်လှည့်ကြောင်း စမတ်နှင့်ကောင်းစွာပညာတတ်၊နှင့်အကြောင်းအဖြစ်အချို့သော ယ့်တိတ်ဆိတ်စွာနေတတ်ခြင်း၊ကောင်းမွန်သောအပြုအမူများနှင့်လေးစားသည်အခြားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အသင္စစ္ေဆးခ်င္ေနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အတွက်ထွက်ကပ်သူ။ နှင့်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ဆင်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောအလုပ်၊ထိုသို့သတိပြုသင့်ကြောင်း၊မျက်နှာကိုအတွက်အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး၊သင်တွေ့လိမ့်မည်ချစ်ကြည်ရေးအများဆုံးစစ်မှန်သည်၊စစ်မှန်သည့်အကြောင်းရေးသားဖို့စာအုပ်။ အဘယ်မှာရှိကြောင်းဖွင့်အ နှင့်လျှို့ဝှက်-သို့မဟုတ်စားပြီးပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောရှေ့နေအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေရန်။ နေသော်လည်းဤပြင်ပအသစ္ကို၊အထီးကျန်နှင့်ပင်ထင်ရစေခြင်းငှါ၊အများအလွန်မြောက်သည်။ ကမလုံလောက်သတိရပါဖို့သူတို့ရဲ့အနုပညာ၊စိတ္ရႈပ္၊လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်၊လှပအေး၎င်း၏ရှုပ်ထွေးနှင့်ပြင်းထန်နှင့်အတူ၊နက်နဲသောအရာဖြေရှင်းပေးရန်။ အဘယ်သည်ဒိန်းရုပ်ရှင်ရုံသို့မဟုတ်စာပေ။ ထူးဆန်းတဲ့အနုပညာနဲ့အတူတစ်သန်း ၊၊ကျောက်တုံးများ၊တခြားအဘယ်အရာကိုရှိပါတယ်၊အဓိပ္ပာယ်ကိုအကြား၊စသည်တို့ကို။ ဒါဟာမ၊ဒါပေမယ့်နေဆဲအပေါ်ပြင်ပမှာနှင့်တိတ်တဆိတ်အတွေးမိဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခုေျပမာဏ၏အကြံ၊အဓိပ္ပာယ်နှင့်စာရေးဆရာရဲ့ရည်မှန်းချက်။ ဒိန်းသဘာဝအတိအကျတူလူအများဤနိုင်ငံ။ အဝေးအေး၊ ၊အရာ၊သို့သော်၊အမှန်တကယ်ဖြည့်ဆည်းဖို့။ ထိုကဲ့သို့သော အလှအပ၊နှင့်အတူတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့ပေမယ့်ထူးခြားတဲ့အရိပ်အရောင်၊ဖန်စီပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ခါးဆစ်-အဒိ။ အဖြစ်ဆုိ္င္တစ္ခု၊ဖုံးကွယ်ကြီးများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်ထို့ကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခဲပြီး။
အများကြီးရှိပါတယ်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ဖို့ချင်သူဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဆွဲဆောင်မှု။ ရှာဖွေရန်ကြော်ငြာသောအမျိုးသမီးကိုသိရန်လိုသည်၊အသုံးပြုရိုးရှင်းချိန်းတွေ့ရှာကိုသုံးပြီးအကြို-ထား။ ဒီဘက်ပါ၊သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူရှာတွေ့လက်ထပ်ပြီးလူများအတွက်ဗာနှင့်အခြားအဆွစ်မြို့။ သင့်ရဲ့ကြော်ငြာတစ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးကိုသိရဖို့လိုလား-ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာသွားမှတဆင့်ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ခုမှာမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်။ မင်္ဂလာဆောင်ရက်စွဲများအတွက်ဗာနှင့်အခြားအဆွစ်မြို့ကြီးများမှာယခုသင်တို့အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့။ မင်္ဂလာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်အရာအရပ်မျိုးစုံသင်၏နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၊ဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ဆွဲဆောင်မှုများ၊ပျော်စရာနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာလူနိုင်တယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်း။ စေ၏လက်ရှိအရေပန်းစားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အတွက်ဗာနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာဤအချက်ပြီးနောက်လစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံ။
တစ်ချိန်ကကျွန်မဒီစာကိုဖတ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ၊သူကျွန်မဆီလာပြီးထင်။ သူ။ သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုးစားပြီး၊သို့မဟုတ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်ယုံကြည်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်"ပေးတော်မူ"ကြောင်းညွှန်ပြလွန်မကြာခဏကြောင့်အနေနဲ့ယုံယုံကြည်မှု၊ဥပမာအားဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦးရှိပါလျှင်သင်သိမီ၊သူတို့ကိုသို့မဟုတ်မလွန်ကောင်းစွာ။ သင်ပင်ယုံကြည်သူတစ်ဦးအနည်းငယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးရှိပါလျှင်သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်နှင့်အတူတစ်ခုခုစောင့်ရှောက်ဆီကနေအဲဒီလူကြောင့်၊သူတို့ ယုံကြည်။ မကြာခဏဤအလျောက်အာရုံ၊မခွဲခြားဘဲရှိပါတယ်ရှိမရှိ၏တစ်စုံတစ်ဦးသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်။ ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်သူတစ်ဦးသည်သစ္စာ၊သူကများသောအားဖြင့်အပြုသဘောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်အမေရိကန်နဲ့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်ကောင်းစွာ။ အကြီးမားဆုံးဂုဏ်ပြုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနိုင်ပေးမည်ဟုကယုံကြည်အခါချစ်ကြည်ရေးဖွံ့ဖြိုး၊ကျနော်တို့ဖွင့်ပြီးယုံကြည်မှုအသီးအသီးအခြား။ ငါမြင်ယုံကြည်ခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ချိန်းတွေ့၏။ အတူအရင်းနှီး၊ကျွမ်းတိုးတက်နိုင်ပါတယ်၊ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်။ ဒါပေမယ့်သူအချို့လူရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်အချိန်တွင်၊ကျနော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ ကြည့်၊အၿပံဳး-အတူ၊ဝန်ခံပြီးအရာအားလုံးကိုဟန်အကျွမ်းတဝင်။ ကနေဒီ၏သဘောမျိူး၊နက်ရှိုင်းတဲ့ချစ်ကြည်ရေးများသောအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုး။ ကျွန်တော်တို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူဖြစ်ကြ။ ကျွန်တော်လည်းပြပ်နှင့်ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါသ။ ဤအသိပညာမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပြီးအရိပ်ကိုအလင်း၏အပြင်ဘက်ကြောင့်ခံစားရစိတ်ခံစားမှုကိုထောက်ခံ။ အလုပ်လုပ်အတွက်လူတို့နှင့်အတူငါတို့သိ၊ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှ၊ကျနော်တို့ပေးနိုင်တာအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်။ ကဲ့သို့သောအတွက်။ ရှိပါတယ် အလုပ်လုပ်ဖို့လူသိများကြသည်ဂီတသမားတစ်ဦးအဖြစ်ပေါင်းစပ်အကောင်းဆုံးအဖြစ်၊အတွက်၊နေရာမလုံလောက်ဖွဲ့ဝင်များ၏ရင်းနှီး၊ဒါပေမယ့်ကောင်းသောတစ်ဦးချင်းစီသမား။ အခြားဥပမာများမှာဝေလ၊အားကစားအသင်းများ၊ အသင်း၊ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့၊စန္ဒယားတီးဝိုင်း၊နှင့်အခြားသူများ။ နှင့်အတူတူပင်များအတွက်ဝင်ကိုယ်ါဆက်ဆံရေး။ ရှိတဲ့အနက်ရင်းနှီးကြားတဲ့အခါလူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးထွက်လာသောကြောင့်၊အမှန်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်။ နေသောသူတို့ဆန္ဒရှိမှယုံကြည်၊စိမ်းသို့မဟုတ်အသိအဖြစ်ကောင်း? ချစ်သောခရစ်ယာန်များ၊လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊အများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင့်ရဲ့မှတ်ချက်နှင့်နှောန့်ကွက်။ ကျွန်တော်နားလည်သင်သည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်၊ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်၊နှင့်ပင်သောအရာတစ်ခုခုရှိပါတယ်။ မကြာခဏတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်စကားလုံးအတိအကျအဘယ်အရာကိုသင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆိုလို။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရှင်းပြချင်တာကတော့အဘယ်ကြောင့်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမြင်အဖြစ်ယုံကြည်အခြေခံအုတ်မြစ်:အမှန်မှာ၊နေ့တိုင်းပင်လူမှကိုယ့်ယုံကြည်မှု၊ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးသို့မဟုတ်ပင်မသိကြပါ(သိ ပင်၏အဓိပ္ပာယ်မှာ"အမှန်"၊ဆိုလိုသည်မှာမကြည့်ရုံသက်သက်ဖြင့်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်စကား)။ ဒါကြောင့်အတွက်ကွား၊ဥပမာအားဖြင့်၊ငါဆရာဝန်တစ်ဦး၏အယုံကြည်သို့မဟုတ်တက္ကစီယာဉ်မောင်း။ ငါသည်ယုံကြည်၊သူတို့အတွက်အချို့သဘောမျိုးငါ့အသက်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရပါဘူးလျှင်သင်၏အမှုကို၊ဒါပေမယ့်ငါသူ့ကိုယုံ။ ငါခံစားရနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်၊သူတို့မဟုတ်သေး။ ၏သင်တန်း၊သူတို့မွေးဖွားလာကြသောအခါသင်ပိုမိုနီးကပ်စွာ၎င်းတို့၏အသိပညာ။ တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်မမယုံကြည်နိုင်စေဖို့တစ်ခုခုပေး၊ငါပြုဦးမည်၊ဒါပေမယ့်သေချာပေါက်မဟုတ်ရင်းနှီးကျွမ်း။ ဒါပေမယ့်လည်းအခြေအရာနှစ်ခုနိုင်ပါတယ်အတူတကွအရမ်းအစမှ။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်မယုံကြည်လူ၊ပိုကောင်းတဲ့သူတို့ကိုသိမှရပါ၊ဒါေပမယ့္အခုထိမသိရပါဘူး။ ဒါကြောင့်ငါနားလည်ရင်းနှီးသောသဘောနည်းနည်းငါ့ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊"၏အဓိပ္ပာယ်မှာလူသိများ"သို့မဟုတ်"ကို"၊ဒါပေမယ့်ကျနော်ကြည့်ရင်းနှီးဖြစ်နက်ရှိုင်းတဲ့အတွင်းဆက်သွယ်ပါ။ စိတ်ရင်းမှန် ၊ကျေးဇူးပြုသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ရန်ဒီနေရာအသစ်သတိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ။
ပထမအထူးပြုအွန်လိုင်းလှိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဘျသင်တို့ရှိသမျှသည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုသင်ရခွင့်ပြုထားသောအကျွမ်းနှင့်အတူမြင်ကွင်းများမြို့နှင့်ကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်အချိန်။ အွန်လိုင်းခရီးသွားဖို့နေရာတစ်နေရာ။ ပထမအနုအွန်လိုင်းကမ်ကြည့်ရှုဝန်ဆောင်မှုအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုသင်ရခွင့်ပြုထားသောအကျွမ်းနှင့်အတူမြင်ကွင်းများမြို့နှင့်ကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်အချိန်။ အွန်လိုင်းနှင့်အတူသွားလာပြီးအရပ်မှ။
အွန်လိုင်းဖဲချပ်အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံထက်ပိုရေပန်းစားသည်အစဉ်အမြဲတစ်နှစ်။ နေ့တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆွစ်ဇာလန်လူအနိုင်ကစားအွန်လိုင်းဖဲချပ်များအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်သိသောဆွစ်ဇာလန်ဖဲချပ်ဆိုက်များသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအဘယ်မှာရှိအကောင်းဆုံးအမြောက်အခြေအနေအားကစားအွန်လိုင်းဖဲချပ်၊သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာမယ့်။ ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းအားလုံးမှအတည်ပြုဆိုဒ်များနှင့်ဒီမှာအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေး။ အခုဆိုရင်သင်တွေ့ကြပြီကောင်းတစ်ဦးအွန်လိုင်းဖဲချပ်ဆိုက်တွင်၊သင်စတင်နိုင်ပါသည်၊အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ။ ရှောင်ရှားရန်ကုန်တင်အဖြစ်ထိထိရောက်ရောက်တတ်နိုင်သမျှနှင့်အာဆိုက်၊အကောင်းဆုံးအပိုဆုအတွက်အွန်လိုင်းဖဲချပ်၊အလေးအနက်စည်းမျဉ်းနှင့်အကောင်းဆုံးဂိမ်းရွေးချယ်ရေးကမ်းလှမ်း၊ငါတို့ဗမာ-လက်တင်လမ်းညွှန် နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၏အမျိုးမျိုးသောအဖဲချပ်ဆိုဒ်များအပေးအသေးစိတ်အချက်အလက်။ ထို့အပြင်၊ငါတို့သည်လည်းပူဇော်အကူအညီအတွက်နားလည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို၏ဂိမ်းအဖဲချပ်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ဖဲချပ်ဟာဗျူဟာများ၊ဒါကြောင့်အခြားသာမဏေနှင့်ပင်ဆုံးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတွေနိုင်အောင်ထိမှန်နှင့်အားသာချက်တစ်ခုရှိသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်။ မှန်ကန်ပိုက်ဆံဖဲချပ်ကစားသမားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အရန္ကစားတိုက်ရိုက်ဖဲပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်ငွေသားဂိမ်းများမှာမကြက္-အခြေပြုကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၊ဒါပေမယ့်မရှိတာထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကစားတစ်ခုလုံးဂိမ်းအွန်လိုင်းဖဲချပ်။ ေျမကြက္နိုလောင်းကစားရုံဂိမ်းရွေးချယ်စရာန့်အသတ်နေစဉ်၊အွန်လိုင်းဖဲချပ်ကစားသမားတွေကစားနိုင်ပါတယ်နှင့်အတူအနိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောလောင်းကြေး၊အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းပုံစံများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အမျိုးမျိုး၏အွန်လိုင်းဖဲချပ်ခွန်ဝန်ကြီးပူဇော်ဒီနှစ်ရှိဆွဲဆောင်များအပြားသစ်ကိုကစားသမားတွေထွက်ကြိုးစားဖို့အွန်လိုင်းဖဲချပ်။ ဆွစ်ဇာလန်ကစားသမားသိသူဖဲချပ်အင်တာနက်ကောင်းပြီ၊အဖြစ်၎င်းတို့၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံများ။ နားလည်ကျွမ်းကျင်မှု၏အစိတ်အပိုင်း၊သော်လည်းဆွစ်ဇာလန်အစိုးရ၊ဖဲချပ်တစ်ဦးအဖြစ်လောင်းကစားဂိမ်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ ဒီအလှည့်တွင်၊စိတ်အားကစားသမားများကိုထပ်မံတိုးတက်လာ၊နှင့်အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဖြစ်နိုင်ခြေများခွင့်ပြုထားတဲ့။ ဤအတောအတွင်း၊အများအပြားဆွစ်ဇာလန်ဖဲကစားသမားများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ရော်၊ နုပညာ၊ နှင့် ၊များလည်းရရှိခဲ့သည့်နိုင်ငံတကာဂုဏ်သတင်း။ ဖဲချပ်ကစားခြင်းအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံပျော်စရာဖြစ်ပြီးအသုံးဝင်၊သို့သော်အခြားအွန်လိုင်းဂိမ်းများအတွက်ဆွစ်ဇာလန်မှကစားသမားများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရန်။ ကစားသမားတွေအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံများမှာပျက်များအတွက်ရွေးချယ်မှု။ ကြည့်ယူငါတို့၏စာရင်းဆွစ်ဇာလန်အွန်လိုင်းကာစီနို! ကျွန်တော်တို့ဟာအများအပြားသီးသန့်ဆုကြေးငွေအာမခံမှပထမဦးဆုံးအပ်ငွေ။ ကတည်းကအစိုးရနှင့်အွန်လိုင်းဖဲချပ်မတရားသောအများ၏တာဝန်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အဘို့အဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခြင်းအကောင်းဆုံးဖဲချပ်။ ဤသည်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံ၊ဒါကြောင့်သဘာဝကျပါတယ်သာကစားသမားတွေထဲကနေအကောင်းဆုံးဝတ် ဆိုဒ်များ။ ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်ခြင်းအင်တာနက်ပေါ်မှာ၊အွန်လိုင်းဖဲချပ်ခန္းမ်ားကိုယ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်၊တက္ကဆက်ပြည်နယ်အကိုင် သည်ငါတို့၏အကြံပေးချက်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏စက်မှုကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၊အကောင်းဆုံးအဖဲအခန်းပေါင်းအဘို့၊စမ်းသပ်မှုများနှင့်သူတို့ဖောက်သည်များအတွက်၊ခွဲခြားနှင့်စာရင်း။ စမ်းသပ်ပြီးနောက်လုံခြုံရေးဖောက်သည်၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သင့်လျော်သောလိုင်စင်စီမံခန့်ခွဲ၊ကျွန်တော်လည်းမြင်ရသောအတိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံအွန်လိုင်းဖဲချပ်ဆိုဒ်များ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဖောက်သည်အထောက်အပံ့၊ဆုကြေးငွေနှင့်မက်လုံးပေးအစီအစဉ်အမျိုးမျိုးဂိမ်းနှင့်သင်တစ်ဦး၏ရွေးချယ်မှုကန့်သတ်။ သို့ယင်းအချက်များကိုယူကောင့်ကို၊ကျနော်တို့ကိုရွေးချယ်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားဆိုဒ်များနှင့်အတူအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများနှင့်အကောင်းဆုံးဂုဏ်သတင်း။ ဤဆိုဒ်များကိုအကြံပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ။ လက်ရှိဆွစ်ဇာလန်ဥပဒေခင္းမရွိကစားအွန်လိုင်းဖဲချပ်ဆိုဒ်များအပေါ်ဥပဒေကြောင်းအရဖြစ်ပါသည်။ ချွင်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်းများ၊ဒီတော့ဖဲမရေတွက်ယခုအချိန်တွင်မှာ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြကိုပြောင်းလဲဖို့အကြောင်း။ တရားဝင်၊အဖဲစတား၊အထူး ဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့အွန်လိုင်းဖဲချပ်၊သူတို့ခွင့်မပြုဖဲချပ်ကစားရန်အွန်လိုင်းရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်လည်းဘာမျှအကြောင်းနိုင်ငံတကာဖဲချပ်ဆိုက်များနှင့်အတွင်းဆွစ်ဇာလန်နယ်စပ်ပူဇော်မှန်ကန်ပိုက်ဆံဖဲချပ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ဆွစ်ဇာလန်ဖဲကစားသမားခဲ့ကြကစားအွန်လိုင်းဖဲချပ်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ။ ကစားသမားမရင်ဆိုင်ပြစ်ဒဏ်မှဆွစ်ဇာလန်အစိုးရသည်။ တရားဝင်၊ပညတ်တရားတားမြစ်စစ်ဆင်ရေး၏အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဆိုက်များ၊ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအစိုးရအာဏာရှိပါတယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှုလည်းမရှိဟူသောအကိုင်ဆွစ်ဇာလန်ကစားသမားတွေများအတွက်တာဝန်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်တစ်ဦးအွန်လိုင်းဖဲချပ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ရှိပါတယ်။ ရအဖဲအခန်းများအတွက်အွန်လိုင်းကစားသမားတွေအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ကျနော်တို့ကစစ်ဆေးအကြံပြုလိုပါတယ်ကလုံခြုံရေးအဘို့၊ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်သင့်လျော်သောလိုင်စင်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်ဒါဟာအစအဘို့အသင့်လျော်ဖဲကစားသမားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အဘယ်မှာအများအပြားကစားသမားတွေရှိသည်အကြံပြုခဲ့ပြီးကစားရန်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာ။ အွန်လိုင်းဖဲချပ်ကစားသမားတွေအတွက်ပေးဆောင်ရပါမည်အခွန်အားလုံးအပေါ်အနိုင်ရ၊ဒါပေမဲ့ဒါဟာအရေးမပါဘူးဆိုရင်သူတို့အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာအချိန်အနိုင်ရ၏။ အခွန်ငွေပမာဏဖြစ်ရပါမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊လူအပေါင်းတို့သည်ကစားသမားသင့်ပါတယ်၊ဟုတ်ပါတယ်၊သူတို့၏ဒေသခံအခွန်စီမံကိန္းကျွမ်းကျင်သူများသို့မဟုတ်ရှေ့နေများသေချာအောင်သူတို့ပေးဆောင်ဝင်ငွေအပေါ်အခွန်များအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအွန်လိုင်းဖဲချပ်ဆိုက်နှင့်အတူစစ်မှန်သောပိုက်ဆံအပ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ရှိပါတယ်အနက္ေရာင္စာရင်းများတရားမဝင်အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဆိုက်များဆိုဒ်များသို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းတရားဝင်အထောက်အထားသို့မဟုတ်အဘယ်သူ၏လိမ်လည်ကျွန်မသိပါတယ်။ မည်သည့်ဖဲချပ်ဆိုက်များကြသည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်း၊နှင့်အသင်းအကြောင်းအရာစံချိန်စံညွှန်းများ၊အမည်မလက်ခံသို့အွန်လိုင်းဖဲချပ်။ ထို့ကြောင့်၊ကစားသမားတွေတိုက်တွန်းကြသည်ကိုအသုံးပွုဖို့ကိဳတင္ေရြး၊အရာများကိုအာမခံဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံအတွက်တည်ငြိမ်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံ။ ကစားသမားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အခွင့်ရှိသမျှဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်းအပေါ်အကြံပြု။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးအကောင့်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့် ထိုညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာ။ ကစားအွန်လိုင်းဖဲချပ်၊သင်ရနိုင်အများကြီးဖဲအခန်းပေါင်းနှင့်ဆုကြေးငွေနှင့်၊ရှိသည့်ထိုအခါတကယ်ပိုက်ဆံသို့ကူးပြောင်း။ အဘယ်သူမျှမလက်ကစားရန်၊နှင့်အကြီးအပိုဆုကြေးရရှိခဲ့သည်အတွက်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအွန်လိုင်းဖဲချပ်၊အကြီးအပေးချေမှု။ ဟုတ်ကဲ့၊ဆွစ်ဇာလန်ကစားသမားတွေ၊ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်င္ငံတကာအဖဲဆိုက်ဖို့လက်လှမ်းအားလုံးပွင့်လင်းပြိုင်ပွဲ။ အနည္းရာင္းရန္-အတွက်ပြိုင်ပွဲမှမြင့်မားသောတုံးပြိုင်ပွဲ-အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံကစားသမားတွေ့လိမ့်မည်၊ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားပြိုင်ပွဲနေ့တိုင်းထိုရက်သတ္တပတ်၏။ ကျနော်တို့အကူအညီအကောင်းဆုံးအကြံပြုဖဲချပ်ဆိုဒ်များခဲပြဿနာများရှိသည်သို့မဟုတ်တိုင်ကြား။ သို့သော်၊လျှင်သင်ပြဿနာများရှိခြင်း၏၊အစဉ်အမြဲအကြံပြုလိုပါတယ်၊သင်ကြိုးစားတိုက်ရိုက်တိုးတက်ဘို့အသီးအသီးလိုင်းပထမဦးဆုံးဖြေရှင်းရန်ပြဿနာ။ ဒါဟာဆိုက်ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမရနိုငျသောပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှု၊ရှင်းပြပြဿနာ၊အဆက်အသွယ်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်က၊ဒါကြောင့်နိုင်ပါတယ်ကြားခံအဖြစ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအချို့သောအချိန်ကုန်၊ နားလည်သောဖဲချပ်ဂိမ်း၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ဒါပေမယ့်ဥပဒေကိုမထိခိုက်သေးတယ်။ ဖဲပြိုင်ပွဲခဲ့တရားဝင်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်၏အပြင်ဘက်နိုဖြစ်နိုင်စဉ်သူများ။ သို့သော်၊ထိုသို့မှကြွလာသောအခါအွန်လိုင်းဖဲချပ်၊ဆွစ်ဇာလန်ဥပဒေနေဆဲအများအပြားနောက်ကွယ်မှအနှစ်အများဆုံးအခြားဥရောပနိုင်ငံများ။ အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဆိုက်များကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကြသည်မဟုတ်ဥပဒေနှင့်မနိုင်၊တရားဝင်မဟုတ်အားဖြင့်ကစားဆွစ်ဇာလန်ကစားသမားများ၊ဒါပေမယ့်လည်းနိုင်ငံတကာအဖဲချပ်ဆိုက်များမဟုတ်သလိုကစားသမားဆွစ်ဇာလန်မှမည်ဖြစ်တရားစွဲ။ သို့သော်၊ထီနှင့်အားကစားအလောင်းအများဥပဒေရေးရာများမှာ၊နှင့်အစိုးရ ဤဥပဒေကိုကြိမ်ဖန်များစွာမကြာသေးမီနှစ်များတွင်အပါအဝင်၊အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဤကဏ္ဍတွင်ရှိသည်။ ထိဤနှစ်သစ်ကူး၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပျက်မမူသေး။ အနိုအသင်းအားအကောင်းဆုံးနေရာဆက်သွယ်လျှင်သင်မည်သည့်လောင်းကစားပြဿနာများ။ ရှိအထူးဇုန်၏တာဝန်ရှိကစားဘယ်မှာရနိုင်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံရောဂါလက္ခဏာ လောင်းကစား။ ဒီနေရာတွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်မည်သို့အကြံပေးချက်များမှရရန်နိုပြန်ဓာတ်ပုံနှင့်မည်သို့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုကူညီဖို့လိုအပ်။ သင်သည်လည်းပေးကြောင်းသတင်းအချက်အသွယ်အချက်များကိုများအတွက်အမည်မသိကစားသမားတွေအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ။ ကျွန်တော်တို့ကွတ်ကီးများကိုသုံးပါရန်ထပ်မံတိုးတက်ကောင်းမွန်။ ဆိုက်ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်၊သငျသညျသဘောတူရန်ကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်း။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့အကြောင်း
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်အသေးပေမယ့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တိုင်းပြည်သင်တွေ့လိမ့်မည်သည့်နေရာတစ်ခုအံ့သြဖွယ်အမျိုးမျိုးအရှုခင်းများနှင့်မနုဿီ:ချိုင့်ဝှမ်းနှင့်ရေကန်ကိုအမြင့်ဆုံးနှင်းဖုံးလွှမ်းမြေတောင်။ နှင့်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်နှင့်နေဆဲထားခဲ့သည်သူတို့၏အမှတ်အပေါ်၊အဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ်အတွက်ဇာတ်ကောင်များ၏အဆွစ်ဇာလန်။ ဟုတ်ပါတယ်၊အများအပြားရှိသည်သြားေယင်းနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်။ ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုထုတ်ဖေါ်နိုင်ရန်အတွက်ကြည့်ဖို့လုံးဝအပေါငျးတို့သအသွင်အပြင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏သဘာဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နီးပါးမဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ပင်အတွက်ဆွစ်ကိုယ်တိုင်:၎င်း၏မတူကွဲပြားမှုအရာ။ တခါတရံထင်ရသောမြို့နှင့်ရွာအကြောင်းတစ်ခုခုရှိပါတယ်လိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြု။ အတူ များတုံ့ပြန်ရန်အယူခံဝင်ခြင်းအားဖြင့်တင်ပြနေတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏အဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ဓာတ်ပုံများ၊အဘယ်မှာရှိတဖြည်းဖြည်းဓါတ္ပံုစုဆောင်းကောက်ယူကြပါတယ်အားလုံးထောင့်ကနေကိုယင်းနိုင်ငံမှအကျော်ကြားဆုံးအရပ်တို့အဖို့အဘယ်သူ၏ဘဝသည္ပိုမိုဆိုရမည်ကို၏ဒဏ္ဍာရီသစ်သားတံတားအသာ ၊ဒါပေမယ့်လည်းအထဲတွင် ။ သာ ၊ဟုတ်ကဲ့၊ကမှန်သည်၊လုံးဝနှင့်အတူစီတန်းသစ်သား။ အစိမ်းရောင်ဆွစ်ဇာလန်မဆန့်ကျင်ဖို့အောင်ြမင်နိုင်ငံသားအများအဖွဲ့ချုပ်မှထည့်သွင်းတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ္။ ဂရပ်ဖစ်:အမဟုတ်ရင်ညွှန်ပြမဟုတ်လျှင်၊အဆိုပါအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ မဆိုကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း၏ဓါတ္ပံုမပါဘဲကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပြားေ။ အသုံးများသည့်ပစ္စည်းများခွင့်ပြုထားသည်သာနှင့်အတူကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီမှုပေါ်တယ်။
ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၊ငါသဘောတူကြောင်း"အထူးအမျိုးအစားများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်"ဥပမာ(က်ား)၊ထောက်ပံ့အားဖြင့်ငါ့ကိုအတွင်းမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းဝန်ဆောင်မှု၊ အတွက်အကောင်အထည်ဖော်အဖြစ်ဆက်ဆံကြလိမ့်မည်အောက်တွင်ဖော်ပြထား"မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုများ၏ဝန်ဆောင်မှု အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ဤသဘောတူညီချက်၏"ကိုယ်ရေးမူဝါဒ"ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်။ ဤသဘောတူညီချက်ခြင်းခံရစေခြင်းငှါမည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်လာထိရောက်သောအနာဂတ်မှာ။ ငါရုပ်သိမ်းရန်ဤသဘောတူညီချက်မှာမည်သည့်အချိန်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အီးမေးလ်ဖြင့်။ တင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အပလီကေးရှင်း၊ငါသဘောတူကြောင်းမှာမှတ်ပုံတင်ခြင်းအချိန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုနေစဉ်ဝန်ဆောင်မှုပေး ဖြည့်ဆည်းရန်ဤသဘောတူညီ၊ငါသည်အဖြစ်ဆက်ဆံကြလိမ့်မည်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အပိုင်း"ကိုဖြည့်စွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုများ၏ဝန်ဆောင်မှု(-ပြည့်စုံရာ၏ဤသဘောတူ)"။
ဖြစ်လာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလွန်ကြီးစွာသောအဖြစ်အပျက်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးဖွင့်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းတစ်ဦး"အများဆုံးအိုကေ"၊အရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်၊ဗီစီးရီး၊သီချင်း၊ပြပွဲ၊လွှင့်၊တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ဘလော့ဂ်များအနှစ်နှစ်ဆယ်၊မဲသင်အကြိုက်ဆုံးစီမံကိန်းအတွက်အသီးအသီးအမျိုးအစား၊နှင့်သင်၏ပျက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သီးသန့်တံဆိပ်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်တွေ့မြင်ခဲ့သောဤအချက်ကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်ပါဝင်မဲနေ့တိုင်းအထိဒီဇင်ဘာဆယ်အပိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်သူတို့အဖို့သူများကိုဆု၊ သူကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျသဖြင့်၊သင်တို့အဘို့အကြီးမြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းအနိုင်ရ
ဝန်ဆောင်မှုဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရအသိအသုံးပြုသူများအထောင်ပေါင်းများစွာ၏နေထိုင်ကမ်ဘာပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆို။ အဘယ်သူမျှမအသက်အရွယ်ကန့်သတ်။ သင့်ရဲ့အဖော်ကိုဖြစ်နိုင်ကောင်လေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေး၏မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊၊တူညီတဲ့ဝါသနာနှင့်ယုံကြည်ချက်။ စောင့်ရှောက်ရန်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဖော်ရွေမှု၊ကြိုဆိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်၊သတိရဖို့အရေးကိုချိုးဖောက်မ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား၌ချက်တင်ကစားတဲ့။ ချက်တင်ကစားတဲ့ရှိပါတယ်စနစ်၏တိုင်ကြား။ မည်သည့်အသုံးပြုသူသည်အမှန်ကိုဖော်ပြတိုင်ကြားကြောင်းအထိုးတောင်းဆိုသို့မဟုတ်ခက်ခဲ-နှိပ် အပြုအမူ၏ သာအသံုုးခ်ကစားတဲ့။ အပေါ်အခြေခံပြီးပေး၊အအိပ္ခလိမ့်မည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ပိတ်ပင်ထားသောအသုံးပြုသူ။ စုပေါင်း၍ရေးခြင်း၏တိုင်ကြားချက်များနှင့်အတူအသုံးပြုသူအချက်ကိုမှဦးဆောင်လမ်းပြသောသူကိုအပြစ်အလျောက်။ လျှင်အသက်သေအထောက်အထားများဖောက်မတည်ရှိပါဘူး၊အစီအမံကိုဧည့်သည်များအစကားပြောမည်မဟုတ်။ မတိုင်ကြားဘဲအကြောင်းပြချက်ကောင်း၊အခြေခံပေါ်မှာအမျက်ထွက်။ ထည့်သွင်းသုံးစွဲသူများ၏ချက်တင်ကစားတဲ့၊သာပျက်ကွက်များအတွက်နှင့်အတူလိုက်နာရန်အထက်ပါ။ အတွက်အရည်အချင်းများ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အိပ္ခ၏ဘဝဝန်ဆောင်မှု၏၊စဉ်းစား၏တောင်းဆိုမှုများ၏သင်တန်းသားများ၏ချက်တင်ကစားတဲ့၊အမွေးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ရှိမရှိကိုဘန်ကီမွန်းကဧည့်သည်။ မှချက်တင်ချက်တင်-အကစားတဲ့ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု၏စည်းကမ်းချက်များကို၏အရင်းအမြစ်။ ဆိုရင်ရှာဖောက်အခြားအသုံးပြုသူများမှ၊ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေကျေးဇူးပြုပြီး။ ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပေါ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ချက်တင်ကစားတဲ့ပထမနေရာအတွက်ကြီးအယဉ်ကျေးမှု၏အပြုအမူနှင့်ရိုသေလေးစားမှု အဆိုပါသဘောထားကိုအ ။
သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဆွစ်ဇာလန်ဘျဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်။ ဆွစ်ဇာလန်ဘျအွန်လိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်နေ့ကိုတလျှောက်လုံး။ ရှိပါတယ် ၄၃ ကမ်တပ်ဆင်ထား။ သင်သည်လည်းကြည့်အကမ်အခြားနိုင်ငံများတွင်:ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊၊လစ္ဗ်ား၊ရိုမေးနီးယား၊စကော့တလန်၊ဂျမေကာ၊ဘရာဇီး၊စပိန္။ ယခုအခါပျမ်းမျှအပူချိန်တွင်အထက္ဂ။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဆွစ်ဇာလန်ဘျဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်။ ဆွစ်ဇာလန်ဘျကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်တနေ့လုံးအွန်လိုင်းကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်။ ရှိပါတယ် ၄၃ ကမ်တပ်ဆင်ထား။ သင်သည်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ရှုအခြားနိုင်ငံများအတွက်
တုန့်ပြန်ဖို့စာတစ်စောင်:'။: ငါဖြစ်အံ့သောပထမဦးဆုံးလက်ဝဲနိုင်ငံ၊ပြီးတော့လူတိုင်းကိုပြောပြ၊အဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ်အဖြစ်တိုက်ရိုက်'။ (ဒိန္း):ကောင်းတစ်ဦးတွင်ရှေ့နေဒိန္း။ အစာ'အရင္း(ဒိန္း):ငါကောင်းတစ်ဦးလိုအပ်ကွာရှင်းရှေ့နေအတွက်ဒိန်းမတ်'။ ငါအခုအပြဿနာ။ မွတ္ခ်က္မ်ားကစာဗစ်၏ဆွီဒင်(အနက္တစ္ဦး၏အသက်တာအတွက်ထောင်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသား)နှင့် ကနေဂျာမနီနိုင်ငံ(နိုင်ငံခြားလူတို့သိရန်မည်သို့ကိုချစ်၊ဒါပေမယ့်ဒီခံစားချက်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်ပစ္စည်းအရာ)မလိုအပ်တဲ့အတွက်ဘာမှမနှင့်မည်သူမဆိုဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အစာ။ ဒါဟာမလိုအပ်ထားမျိုးသမီးများထိုကဲ့သို့သောလား။ အစာမျက်နှာများ ။ ဒိန္း'ငါအခုအပြဿနာ။ မွတ္ခ်က္မ်ားကစာဗစ်၏ဆွီဒင်နှင့်ဂျာမဏီကနေ '။ ဒါဟာမလိုအပ်ထားဖို့အမျိုးသမီးများထိုကဲ့သို့သောအပေါ်အမြင့် ရွေးချယ်စရာ။ တုန့်ပြန်စာမျက်နှာများ ။ ဒိန္း'ငါအခုအပြဿနာ။ မွတ္ခ်က္မ်ားကစာဗစ်၏ဆွီဒင်နှင့်ဂျာမဏီကနေ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအံ့သြဖွယ်အရာအရာဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှနိုင်ပူနွေးသောအအေးညဉ့်တွင်။ ခေါင်းစဉ်အပေါ်:'အလုပ်သို့မဟုတ်မ'နဲ့'အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်၊သင်သည်အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်တဲ့ခင်ပွန်း'တုန့်ပြန်စာအ ကနေဒိန်း'ခင်ပွန်းပါးပေါ်မှာငါ့အနား။ ဆရာဝန်အပြောကအလွန်ကြီးမားတဲ့အလွှာကွဲများလိုအပ်ခွဲစိတ်ကုသ'တုန့်ပြန်စာအလီမှအရှေ့တောင်၊'ငါလက်ထပ်အရိတ္ဒိန္း၊ဒါပေမယ့်တချို့အကြောင်းပြချက်အဘို့ငါတိုက်ရိုက်လစ္ဗ်ား၊ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်ကြောင်းကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မအသက်ရှင်ဝေးအချင်းချင်းမှ'ရိုသေလေးစားမှုနှင့်သည်းခံဖို့အခြားသူများကို-အစတစ်ခုမှာအရုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်။ အစာ'ဗစ်သမား(အင်္ဂလန်)နှင့်ကိုဒိန်းဝိညာဉ်။ တုန့်ပြန်ဖို့စာတစ်စောင်မှဖတ်ပါ ။ ။ ဒိန္းသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအံ့သြဖွယ်အရာအရာဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှနိုင်ပူနွေးသောအအေးညဉ့်တွင်။ ခေါင်းစဉ်အပေါ်:'အလုပ်သို့မဟုတ်မ'နဲ့'အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်၊သင်သည်အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်တဲ့ခင်ပွန်းသည်က၊'ငါလက်ထပ်အရိတ္ဒိန္း၊ဒါပေမယ့်တချို့အကြောင်းပြချက်အဘို့ငါတိုက်ရိုက်လစ္ဗ်ား၊ဒါကြောင့်ထွက်လှည့် ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မအသက်ရှင်ဝေးကနေအသီးအသီးအခြားအဆိပ် ၊ဒိန္း:တုန့်ပြန်ဖို့ထံမှစာတစ်စောင် ကနေဒိန်း'ခင်ပွန်းပါးပေါ်မှာငါ့အနား။ ဆရာဝန်အပြောကအလွန်ကြီးမားတဲ့အလွှာကွဲများလိုအပ်ခွဲစိတ်ကုသ'ချစ်လက်စ်မေပူးပေါင်းသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်။ တုန့်ပြန်ဖို့ဒုတိယစာလက်စ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ'အတွေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့:ပဲထားခဲ့ဖို့ဒိန်းမတ်၊နှင့်ရှိပါတယ်။' အလိုရှိသောအဘို့အသူ၏ဇနီးဟောင်းဖြစ်ဆက်ဆံသင့်အကျိုးစီးပွား၏အခြားအမျိုးသမီး။ အစာကလည်းကနေ ။ ဘတ်။ ငါရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်အကြောင်းအခြားသူတစ်ယောက်နားလည်ကြလိမ့်မည်။' ေယာက်ၤားေဖြစ်ပါတယ်၊လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသင်လေးစားမှုနှင့်ချစ်ခြင်း။ အခုအဲလက်စ်မှအမေရိကန်နိုင်ငံကိုစိတ်ကူးရိုးရှင်းသော:ပဲထားခဲ့ဖို့ဒိန်းမတ်၊နှင့်ရှိပါတယ်။' (ေနာ္ေဝ):အစာထဲကနေ ဟော်လန်ကနေပြီးမှစာတစ်စောင်ကက်ကနေဂင်၊အဘယ်သူသည်လက်ထပ်ဖို့အရိတ္ဒိန္းဒန်(အင်္ဂလန်):အစာထဲကနေကက်(ဟေဂင်)၊အဘယ်သူသည်လက်ထပ်ဖို့အရိတ္ဒိန္း'၊မရွေးနိုင်ငံသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားအဖြစ်၏ဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူတစ်ဦးချင်၏ကျန်သုံးဖြုန်းရန်ငါ အသက်။ပ။ သူကမွဂင်ပိုမကြာခဏကျန်ကြွင်းလှည့်ဖြားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသမီး။ အစာကနေ ဟော်လန်မှသူမ၏တုန့်ပြန်မှစာတစ်စောင်ကက်ကနေဂင်၊အဘယ်သူသည်လက်ထပ်ဖို့အရိတ္ဒိန္းငှါလန်:အတံု။အလႅာဟ္မွဂင်မှသူမ၏၊'ငါဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကိုစော်သင့်ရဲ့အရေးအသား။ တုန့်ပြန်ဖို့ဒီစာမှအင်္ဂလန်အပေါ်အခြေခံပြီးအတွေ့အကြုံများ၌နေထိုင်ဒိန္းသည်ဤမျှခက်ခဲသည်မဟုတ်။ တုန့်ပြန်ဖို့ထံမှစာတစ်စောင် 'ကောင်းသောနေ့၊ချစ်ခင်ရပါသောမင်းသမီး၊ေနာ္ေဝႏွင့္ဒိန္း။'နှင့်စာတစ်စောင်ကို ဒိန်းမတ်မှရတဲ့အမတ်အပေါင်းတို့သည်လမ်းပတ်လည်။ မွတ္ခ်က္မ်ားကစာဗစ်၏ဆွီဒင်(အနက္တစ္ဦး၏အသက်တာအတွက်ထောင်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသား)နှင့် ကနေဂျာမနီနိုင်ငံ(နိုင်ငံခြားလူတို့သိရန်မည်သို့ကိုချစ်၊ဒါပေမယ့်ဒီခံစားချက်ရှိပါတယ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှမဘေးထွက်ပစ္စည်း)၏မျက်နှာကို(ဒိန္း):အခြေခံပေါ်မှာငါ့အအတွေ့အကြုံများ၌နေထိုင်ဒိန္းသည်ဤမျှခက်ခဲသည်မဟုတ်။ တုန့်ပြန်ဖို့ထံမှစာတစ်စောင် 'ကောင်းသောနေ့၊ချစ်ခင်ရပါသောမင်းသမီး၊ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ။'နှင့်စာတစ်စောင်ကို ကနေဒိန်း (ဒိန္း):အခြေခံပေါ်မှာငါ့အအတွေ့အကြုံများ၌နေထိုင်ဒိန္းသည်ဤမျှခက်ခဲသည်မဟုတ်။ တုန့်ပြန်ဖို့ထံမှစာတစ်စောင် 'ကောင်း နေ့၊မင်းသမီးဧည့္ခန္းတြင္ေနာ္ေဝႏွင့္ဒိန္း။'နှင့်စာတစ်စောင်ကို ဒိန်းမတ်မှစင်ကာပူ (ဒိန္း၊ဂင်):အစာ'(ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ဘာလင်):လက်ထပ်ထိမ်းမြားအရိတ္ဒိန္း၊ဘာလင်။
ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ဆေးဝါးအဖြစ် ၃၂ ရူ(လိုအပ်သည်များအတွက်အချို့စာရင်းပါ။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့၊ဆေးသမားအကိတ္ထား၊ကျော်ရှိပါတယ် ၂၀၀ သေတ္တာကြောင်းအရာတစ်ခုခုအတွက်ကိုအတူတူဖြစ်လိမ့်မည်။ လာမယ့်အချိန်တစ်ဦးကြင်ဖော်တောင်း"အတွက်မြင့်မားသောအစားအသောက်ဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးတန်း ၃၂။ နှစ်ဦးစလုံးကိုအသုံးပြုဆေးဝါးများနှင့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်၊ထိုခင်ပွန်းသည်ဆေးဝါးနှင့်အတူရွှင်လန်းသော သူကအပြုံးမှာကောင်တာနှင့်ပြောတာက"အိုး၊မဟုတ်မမှန်ဘူး၊ဆပ်ကဲ့သို့များများစားစားချင်တယ်။"အထွေထွေ:၏အသက်အရွယ် စတင်ကျင်းပရန်တက်များအတွက်ကောင်းစွာအချက်ကိုအကြောင်းကြပြီမဟုတ်အဆင်ပြေကောင်းစွာဒီထုတ်ကုန်။ ဤသည်မှာလည်းလွယ်ကူသည်။ လမ်းဖြင့်၊ယောက်ျားများမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တူ၊တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှု။ ကြိုးစားလျှင်၊ယခုသင်ဝယ်နိုင် ၁၅ အသက်အနှစ်(မိန်းကလေးများ ၃၇)။ အဓိကမေးခွန်းအဘယ်ကြောင့်အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်လူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ၂၂ အသက်အနှစ်၊အခါဤလုံလောက်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထက်မြက်သော၊ပူသော၊နှင့်အတူပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါဘယ်သူကို၊ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းပြောဆိုရန်အရာတစ်ခုခု။ ဒါပေမယ့်ငါပြောမည်။ ကြတာကိုကျွန်မပြောပြမယ်။ သင်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်အမျိုးအစားတရား။ မကြာမီပြီးနောက်၊ဒါကြောင့်ရွေးကောက်အားဖြင့်ငါ၏အတ္တအဖြစ်နားထောင်ခြင်းပစ်-ငါ့အကျော်အလေ့အကျင့်။ နှင့်ရောကြည့်နေစဉ်အစာ၊အမွတ္အ၏အစအဦးဗျာဆရာရဲ့ခေတ်(လွွှာအင်္ဂသည် ၁၅ နှစ်အထက်)။
ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်စေမယ်လို့အဝိုင္းအားလုံး၏သင်သည်အဘယ်သူသည်သိကိုယ်တိုင်စပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအမျှဝေကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှဆုံးဝါသနာ၊သောငါတို့သည်ဖြုန်းမှာအစည်းအဝေး-ကအမြဲသာယာသောအခိုက်နှင့်အတူ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့စောင့်မျှော်နေကြသည်အစည်းအဝေးအဖြစ်အများအပြားဗိုမိတ်ဆွေများအဖြစ်ဖြစ်နိုင်(နှင့်သင်တန်း၏ဗို)ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးအနေ့နှင့်အမြဲသူတို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ! ဦးကို။။။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီနိုင်ကြဖို့အစီအစဉ်၊ငါတို့သည်သင်တို့အဖို့ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်ရှာတွေ့သောအဖြေလာ။ ကျနော်တို့ပိုကောင်းကြားအောက်ဖြစ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အစည်းအဝေးနှင့်စာရင်းတစ်ခု။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ေက်းဇူးအဖိတ်၊ငါသည်အလွန်ဝမ်းသာဖြစ်သူနှင့်အတူဖြစ်ဖို့အတူသင်နှင့်အတူအောင်ပွဲခံရန်။ ငါသည်လည်းကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်ငါ၏အနည်းငယ်အစိမ်းရောင်။
ကိုရွေးခင်။ နိုဝင်ဘာလသည်ပုံမှန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်"အကြိုက်ဆုံး၏အော်"။ အားလုံးတို့တွင်ပါဝင်၊ကျွန်တော်ကိုပူဇော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဆုများပမာဏအတွက်"ပြင်သစ်"။ အမီတာအမြင့်အရြယ္အသစ်တခုဖြစ်ပါတယ်၊တဦးတည်းလီတာဒီဇယ်နှင့်အော်တိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆင့်။ အရည်အလေးဘီးမောင်းကားလည်းသဘောတူ၎၏အသွင်အပြင် အသားေရအလှပြင်ဆိုင်။ ေကားလမ်းယာဉ်များအတွက်သင့်လျော်လမ္းၾကားမ်ားဆွဲဆောင်မှုဦးဆောင်သောအလင်းရောင်၊သင်နှစ်ခုအကြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်။ သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အတိအကျကိုအသေးစိတ်အချက်အ ၊ထိုက်သည်ဆွစ်ပြင်သစ်။"-ဟုတ်ကဲ့။ ဒုတိယဆု၊"သင်တို့အရှက်ဖို့ရွေးချယ်ပါနှင့်၎င်းတို့၏တီ"၊လွတ်လပ်လပ်ပဳျပင္ၿ။ ရွေးချယ်မသာ၊ဒါပေမယ့်လည်းအရောင်နဲ့သင့်အတွက်ဦးစားပေးဖစ္ပါတယ္ကုန်ကျကြောင်းလုပ်ငန်းများ။"-အတူတူ။ အကျစ်လစ်သိပ်သည်း၊မီတာ-ရှည်ဇအသစ်တခုဖြစ်ပါတယ်၊လီတာ-ရှည်ဇယ်နှင့်အော်တိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆင့်။ အရည်အလေးဘီးမောင်းကားစစှဲနှင့်အတူ၎င်း၏အရေဖြစ်ကြော့သားရေသံေခ်း။ ေကားလမ်းယာဉ်များအတွက်သင့်လျော်လမ္းၾကားမ်ားဆွဲဆောင်မှုဦးဆောင်သောအလင်းရောင်၊သငျသညျကနေရှေးခယျြနိုငျနှစ်ဦးဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်။ သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အတိအကျကိုအသေးစိတ်အချက်အ ၊ထိုက်သည်ဆွစ်ပြင်သစ်။"-ဟုတ်ကဲ့။ ေကားလမ်းယာဉ်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်-လမ္းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူသိသာဦးဆောင်တဲ့လင်းနိုင် ကနေရွေးချယ်နှစ်ခုဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်။ သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အတိအကျကိုအသေးစိတ်အချက်၏အဆိုပါရေဒါကုန်ကျလုပ်ငန်းများ။ -ဟုတ်ကဲ့။ ဒုတိယဆု၊"သင်တို့အရှက်ဖို့ရွေးချယ်ပါနှင့်၎င်းတို့၏တီ"၊လွတ်လပ်လပ်ပဳျပင္ၿ။ ရွေးချယ်မသာ၊ဒါပေမယ့်လည်းအရောင်နဲ့သင့်အတွက်ဦးစားပေးဖစ္ပါတယ္ကုန်ကျကြောင်းလုပ်ငန်းများ။"-အတူတူ။ အမီတာအမြင့်အရြယ္အသစ်တခုဖြစ်ပါတယ်၊တဦးတည်းလီတာဒီဇယ်နှင့်အော်တိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆင့်။ အရည်အလေးဘီးမောင်းကားစစှဲနှင့်အတူ၎င်း၏အရေဖြစ်ကြော့သားရေသံေခ်း။ နောက်ဆုံးနေ့။ အဆိုပါဆုရှင်ဆုံးဖြတ်များအတွက် ။ ဆုအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ကြသူပုဂ္ဂိုလ်များတွင်တည်ရှိပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်သူတို့ရောက်ရှိသည့်အသက်အရွယ်။ အဆိုပါအယူခံကိုတရားရုံးကဖယ်ကျဉ်။ မစာပေးစာအကြောင်းဆွဲပါ။ န္ထမ္းမ်ား၏ မဲလိုက် သိပ္ေ၊ သိပ္ေ၊ကင်း သိပ္ေနှင့်အခြားအုပ်စုကုမ္ပဏီ ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများဤသူတို့သည်န်ထမ်း၊အကျင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။ ဆုမရထားကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲဖို့ငွေသား။ မဲလိုက် သိပ္ေ၊ သိပ္ေ၊ကင်း သိပ္ေနှင့်အခြားအုပ်စုကုမ္ပဏီ အရံအမှန်ပြောင်းလိပ်စာ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်။ အားဖြင့်မှာပါဝင်ပြိုင်ပွဲ၊အင္သူသဘောတူကြောင်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာအသုံးပြုစေခြင်းငှါအားဖြင့် မဲလိုက် သိပ္ေစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။ မဲလိုက် သိပ္ေခွင့်ရှိပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်လွှဲပြောင်းရန်အ အုပ်စုကုမ္ပဏီများအတွက်ဒီရည်ရွယ်ချက်။ အပါဝင်နိုင် မဲလိုက်သိပ္ေမှာမည်သည့်အချိန်ဆိုရင်အပြောင်းအလဲနှင့်လွှင့်ချက်အလက်များ၏ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့မလိုအပ်ပါ။လွှဲပြောင်း၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုတတိယပါတီသို၊၏ချွင်းချက်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၊မစဉ်အတွင်းနေရာယူပြိုင်ပွဲ၊နှင့်အထက်ပါကုမ္ပဏီတွင်ပါဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်။ အတူ။ စစ်ဆေးနေခြင်းအားဖြင့်ဒီအကွက်၊အင္သူသဘောတူကြောင်းတဦး မဲလိုက် သိပ္ေနှင့်အ အုပ်စုကုမ္ပဏီမှအချက်အလက်ပေးပို့အကြောင်းပြိုင်ပွဲနှင့်ကမ်းလှမ်းအီးမေးလ်ကနေတဆင့် အၾကိဳက္ဆံုး။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်မေးလ်ပို့နိုင်သောစာရင်းမှာမည်သည့်အချိန်။.
အထိမ်းအမှတ်အနေအထားပုံစံအာရုံခံကိရိယာ။ အထူးနှုန်းရှင်တည်ရှိသောဤအရပ်ဌာန၌အလျှောက်ပို့ပေးကြောင်းကိုအချက်အလက်အရေအပူချိန်ကို။ ဤသည်အများဆုံးတိကျမှုနှင့်လက်ရှိဒေတာ။ သင်္ဘောကိုအတူအပူချိန်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းမြေပုံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံကိရိယာများတပ်ဆင်ထားပါသည်ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်နှင့်အတိုင်းအတိအကျအရေအပူချိန်မီတာလျှင်အပေါ်သွား။ ဒေတာများအရတိုင်းနာရီအခါသင်္ဘောကိုဂွမ်း။ သင်နှိပ်တဲ့အခါအပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေရာသင်္ဘောရဲ့တည်နေရာကိုခြေရာခံ၊မြေပုံပြသထားသည်အားလုံးနှင့်အတူအချက်များကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အပူချိန်။ အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စက်၊အပူချိန်နှင့်တိုင်းတာချိန်ဖြစ်ကြောင်းပြသ။ ရှုမွမ်းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံဒီအနေအထားအခါဖြတ်သန်း။ စစ္ေကိုနောက်ဆုံးပေါ်အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်အချိန်နှင့်အဆောင်ခဲ့ပုံများ၏ဂြိုလ်တုရဲ့အပူချိန်နှင့်ကမ္ဘာမြေရဲ့မျက်နှာပြင်-ကျွန်တော်တို့သင်ပြပါလိမ့်မယ်ဤအချက်အလက်။ သတင်းအချက်ပြသတဲ့ရုပ်ပုံရဲ့တည်နေရာအတွက်မကြာသေးမီရက်နှင့်သာအတူအဟောင်း။ ဒီအနေအထားကမဖြစ်သေးဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်နာရီအနည်းငယ်။ အဲသည်အကြောင်းအစီရင်ခံဒီ
အောက်ပါစာရင်းပေးသုံးသပ်အကြံပြုင္ရန္အတြက္အရေးကြီးဆုံးအတောင်နှင့်လမ်းကြောင်းအတွက်။ ဈေးနှုန်းများများမှာတရားဝင်ကနေပုံမှန်အတိုင်းထွက်ခွာ။ မမြင့်မားဘူးဆိုရင်အခြားထွက်ခွာအချက်များနဲ့ရွေးချယ်ကြသည်။ အမှုအတွက်သံသယ၊လက်ရှိအတြက္သံုး၏တစ်ဦးချင်းစီအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ကဏ္ဍများ၏အခြေခံကျကျအရေးပါသည်။ ဒီအထုပ်နိုင်သတ်မှတ်ထားသောတက်သို့မဟုတ်ဆင်းနှင့်အဆင်ပြေအပေါ်မူတည်ပြီးကြာချိန်၏ကတိကဝတ်ရဲ့အရှည်လမ်းကြောင်း၊အဆိုပါဒီဂရီ၏အခက်အခဲ၊အလာတဲ့အခြေအနေ၊သင်တန်းသားများနှင့်ရှု၏အပစ်။ အားလုံးကုန်ကျစရိတ်များအားဖြင့်ဘွားမြင်သော။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊အထူးပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ်ငှားရမ်းလမ်းညွှန်လျှောက်ထားရန်တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ရက်ပေါင်းများစွာအတွက်၊အမှုပြတ်တောက်ခြင်းခရီးစဉ်ကြောင့်ရာသီဥတုဆိုးရွားမှ၊အမှုအတွက်မပြည့်စုံ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအားဖြင့်ဧည့်၊သို့မဟုတ်အရက်များခရီးသွားလာ၏။ အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သောဤအချက်များအားရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်တည်ထောင်တနာ့တာဝန်များ၊ဥပမာအားဖြင့်နှင့်အတူ၊ဝယ်ယူရရှိမှု၏"ညာဘက်"။
အခါဒါဝိဒ်သဘောပေါက်ဘယ်လိုကြီးမြတ် ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်သူ့ကိုအတွင်းအကွာအဝေး ပြောနှင့်လဇ်မင်းအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးလိမ်လည်။ ဒါဝိဒ်ကသတိပြုမိ၏အရေးပါမှုကို ပေးသူမ၏ကွဲပြားမှုနှင့်အတူအလုပ်အဖွဲ့၊အမေးကိုအတူတကွရရန်သူ့ကိုနှင့်အတူ။ သူထိ ရဲ့ပုဆိန်နှင့်လူတန်းစားကနေကွယ်ပျောက်နှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေများကမဟုတ်၊လောကကြောင်းဒါဝိဒ်ကိုချစ်၊ပင်သော်လည်းသူသည်ရိုးသားသူမ၏ချစ်၊ဒါပေမယ့်သူမကပိုပြီးထက်ထက်ဝက်တစ်ဒါဇင်စီးပွားရေးအင်အားနောက်ကွယ်မှ။ ဖီပထမဦးဆုံးမှာပေမယ့်၊အံ့သောယွန်ကိုကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်၊သင်မူကား၊နားလည်သူအကြောင်းပြချက်။ သို့သော်၊သူမအများကြီးပိုဆန့်ကျင်ဖို့လေ့။ ဖီပါစေခြင်းငှါအလိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု၊ဒါပေမယ့်မအရာအားလုံးလုပ်ပါ တယောက်တည်း၊ပြီးတော့သူမေးယွန်မှပြန်လည်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ မသက်မသာခံစားရထိ၊အနည်းဆုံးအထိကာကွယ်နှင့်စာရာသည်မျက်မှောက်သောအနမ်းမလိုအပ်ခဲ့သည်။ ပင်တိုင် ဝန်ခံချင်ပါတယ်လို့ပြောဖို့စာ၊ချကြောင်းသူမ၏နမ်းခဲ့ပါဘူးမည်သည့်သဘောမျိုးလုပ်ပါ၊နှင့်အတူတက်အဆုံးသတ် ။ စာရာသည်သူ့ကိုယုံကြည်သည်။ အနည်းဆုံးကာလပတ်လုံးသင်လုပ်နိုင်အဖြစ်တိုက်ရိုက်သတိရှိရှိနှင့်အတူအဘယ်သို့ကက်ပီးသူမ၏လျစ်လျူရှု။ (စာသားဟုေ)အခါဒါဝိဒ်သဘောပေါက်ဘယ်လိုကြီးမြတ် ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်သူ့ကိုဖြစ်ပါသည်၊အကွာအဝေးမှာ ပြောနှင့်လဇ်မင်း၊အဘယ်သူသည်အတွက်စေ့စပ်ခဲ့သည်ဆာက္လုပ္ေရးလိမ်လည်။ ဒါဝိဒ်ကသတိပြုမိ၏။ အဖြစ်ဒါဝိဒ်သဘောပေါက်ဘယ်လိုကြီးမြတ် 'ကိုယ်တော်၌ယုံကြည်ကိုးစားဖြစ်ပါသည်၊အကွာအဝေး၏ညှစ်ဖို့ပြောနှင့်လဇ်မင်းရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလိမ်လည် ။ ဒါဝိဒ်ကသတိပြုမိ၏။ အဖြစ်ဒါဝိဒ်သဘောပေါက်ရုံမည်မျှကြီးမြတ် ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်သူ့ကိုဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်အတွင်းညှစ်အကွာအဝေးကိုပြောနှင့်လဇ်လိမ်လည်နှင့်အတူဒီဇိုင်းများအတွက်လေယာဉ်။ ဒါဝိဒ်ကသတိပြုမိ၏။ အဖြစ်ဒါဝိဒ်သဘောပေါက်ဘယ်လိုကြီးမြတ် ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်သူ့ကိုဖြစ်ပါသည်၊အကွာအဝေးမှာ ပြောနှင့်လဇ်မှလွတ်မြောက်ရန်အဆာက္လုပ္ေရးလိမ်လည်။ ဒါဝိဒ်ကသတိပြုမိ၏။ အဖြစ်ဒါဝိဒ်သဘောပေါက်ဘယ်လိုကြီးမြတ် ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်သူ့ကိုဖြစ်ပါသည်၊အကွာအဝေးမှာ ပြောနှင့်လဇ်မှလွတ်မြောက်ရန်အဆာက္လုပ္ေရးလိမ်လည်။ ဒါဝိဒ်ကသတိပြုမိ၏။ အဖြစ်ဒါဝိဒ်သဘောပေါက်ဘယ်လိုကြီးမြတ် ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်သူ့ကိုဖြစ်ပါသည်၊အကွာအဝေးမှာ ပြောနှင့်လဇ်မှလွတ်မြောက်ရန်အဆာက္လုပ္ေရးလိမ်လည်။ ဒါဝိဒ်ကသတိပြုမိ၏။ အဖြစ်ဒါဝိဒ်သဘောပေါက်ဘယ်လိုကြီးမြတ် ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်သူ့ကိုဖြစ်ပါသည်၊အကွာအဝေးမှာ ပြောနှင့်လဇ်မှလွတ်မြောက်ရန်အဆာက္လုပ္ေရးလိမ်လည်။ ဒါဝိဒ်ကသတိပြုမိ၏။ အဖြစ်ဒါဝိဒ်သဘောပေါက်ဘယ်လိုကြီးမြတ် ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်သူ့ကိုဖြစ်ပါသည်၊အကွာအဝေးမှာ ပြောနှင့်လဇ်မှလွတ်မြောက်ရန်အဆာက္လုပ္ေရးလိမ်လည်။ ဒါဝိဒ်ကသတိပြုမိ၏။
လက်ထပ်ပြီးမင်းသမီးရောက်လာမှာသဟဇာတနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကို။ ထိုကွောငျ့၊သူတို့ပိုပြီးလှပတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီး၊အတွေ့မှသုတေဒိန္း။ သို့သော်အရာအားလုံးကိုအပြောင်းအလဲအခါပထမဦးဆုံးကလေး။ သိပ္ပံပညာရှင်များဖိတ်ခေါ်ဖို့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက် မှတ်ချက်အမွှာညီအစ်မ၊ေျပာသည္။ ကြည့်ရှုစုံလင်သူများထက်သောခဲ့ကြသည်၊လက်ထပ်ကြောင့်ခံစားရသည့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်ပိုပြီးစိတ်ချယုံကြည်ထက်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း။ ညီ၊အပေါ်သက်ရောက်မှုအသွင်ဟုသုတေ။ ထွန်းနှင့်အတူသားသမီးများ၏အအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတွေစောင့်ဆိုင်းနေစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊မထည့်သွင်းဖို့သူတို့ရဲ့အလှအပ။ ေဒိန္းကြောင်းကောက်ချက်ချမည်နိုင်ရန်အတွက်အလှ၊မင်းသမီးလိုအပ်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ယုံကြည်အနာဂတ်မှာ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စီးပွားပျက်ကပ်၊စိုးရိမ်မှုကသူတို့၏နေ့စဉ်မုန့်လုသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်။ ဒီပေရည်ရွယ်သောသူတို့အဘို့ပိုပြီးစောင့်ကြည့်လေ့လာသင်၏သူသတိထားမိ ၊စာလံုးေပါင္း၊ပုဒ္ျနှင့်အချက်အလက်အမှားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျမ်းနှင့်လိုရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြိုတင်မဲအတွက်အားလုံးသောသူများပူးပေါင်းပြီးတွင်ထုတ်လေ့ရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများ။ သင့်ရဲ့အကူအညီသည်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်သာအသုံးအနှုန်းကြောင့်လည်းအရေးတို့အဘို့တော်မူသောစာဖတ်သူများမှကျေးဇူးတင်စကားသင်ဖတ်ဤကျမ်းတွင်တစ်လျောက်ပတ်သောဗားရှင်း။ အကြောင်းသိစေအကွဲပြားမှု ၊ကမီးမောင်းထိုးနှင့်အတူသင့်ရဲ့အချိန်ကို
နောက်ရက်အနည်းငယ်စွန့်စားအလမ်းအပေါ်အစ်ကိုမိက္ခေလနှင့် ဖင်ရှော့၏၊ထိုမြို့၏အဆက္အသြယ္(တာဂျစ်ကစ္စတန်)ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဖော်ခဲ့သည်မြူးနစ်(ဃ)၊ဆောင်ခဲ့သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှနိုင်ငံများမှခရီး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၏အစွမ်းသတ္တိစံခ်ိန္တင္ထားဂေါ့(တပ်ဆင်ထားအောက်)နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ပြုပြင်တာတွေအကုန်တင် အပါအဝင်၊ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၊"ကီ"ကသွားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ(အမွတ္ၽြန္ၿယွင်းသို့မဟုတ်ပင် ၊စသည်တို့ကို။)။ အသင်းမ၏အနည်းဆုံးတစ်ဦးအသုံးအပိုဘီးပို့! ဒီမြေတပြင်လုံးအထုပ်အဖြစ်လာသည်။ ဤအထူးပြဲ။ ယူသင်တန်းသားများမှအဝေးမြို့အဆက္အသြယ္(မြို့တော်၏အမျိုးအကြောင်းကိုအကီ)၊နှင့်ဤဖြစ်ပါတယ်ညီရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊အချို့မှာအချက်အဘယ်သူမျှမကြာကြာဆု၊ဒါပေမယ့်တစ်ခုသာကောင်း။ တစ်ခုချင်းစီအဖွဲ့အမည်ကားမကယ်မလွှတ်မှဘေးကင်းစွာဆက္အသြယ္။ အဲဒါကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ထားတက်များအတွက်လေလံ၊နှင့်အမြတ်အစွန်းတွေကိုအမည်အပြည့်အဝအတွက်အသုံးပြုအကောင်အထည်ဖော်င္ငံတကာ စီမံကိန်းမှာတာဂျစ်ကစ္စတန်။ ။ နိုင္ပါျသိပ္ေ၊စိုက်ပျိုးရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်လဲလှယ်အလောင်းတွေ၊ဇွန်လကတည်းကနှစ်သစ်ကူး မိတ်ဖက်များအတွက်အတိအ ။ မိုက်ကယ်နိုင္ပါျနှင့်သူ၏ဝန်ထမ်းအပေါ်ဖွစျလိမျ့မညျအဓိကလမ္းမွေ့လျော်နိုင်အောင်နောက်ဆုံးပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်။
လောလောဆယ်၊ဒါကြောင့်အခုထိအစိုးရ။ ကာကွယ် နှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားသူအဖွဲ့အစည်းအတွက်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့လောက်လိုအပ်သူလူအသက်ရှင်ဖို့ကျန်းမာတဲ့ဘဝအသက်တာနှင့်အတူအားလုံးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်။ ကၽြန္ေတာ္တိုသင်ဖန်တီးခြင်းအတွက်နှင့်အဖော်ဆက်ဆံရေး။ ကြၽန္ေ ၃၄။ ငါအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်စာရင်းကိုင် ၃၄။ ဇာတ်ကောင်။
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေး။ ငါတို့၏န်ထမ်းသင်ကူညီလိမ့်မည်နှင့်အတူသင့်မေးခွန်းများအဖြစ်အလျင်အမြန်၊မသိမသာနဲ့နက်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုသဘောမျိုး၏နောက်ကျောတက်သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှု။ ဒေတာကိုပို့ပေးမှာဝှက်ထားတဲ့ပုံစံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးလက်မှတ်များအာမခံအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့အသင့်အွန်လိုင်းဝယ်ယူ။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေး။ ငါတို့၏န်ထမ်းသင်ကူညီလိမ့်မည်နှင့်အတူသင့်မေးခွန်းများအဖြစ်အလျင်အမြန်၊ဂရုတစိုက်နဲ့လေးလေးနက်နက်။ အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုသဘောမျိုး၏နောက်ကျောတက်သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှု။ ဒေတာကိုပို့ပေးမှာဝှက်ထားတဲ့ပုံစံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးလက်မှတ်များအာမခံအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့အသင့်အွန်လိုင်းဝယ်ယူ။
ဆွစ်ဇာလန်ဖလား: အမျိုးသမီးနှင့်အသင်း -သတင်း
နောက်ဆုံးအဆင့်၏အဆွစ်ဇာလန်၊သင်းလူနေမှုအမျိုးသမီးနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးအပါဝင်အမျိုးသားလိဂ် ။ နိုကိပ်ဆုံးရှုံးဖို့အမွီအမျိုးသမီးတစ်ဦးနေအိမ်တွင်ဂိမ်း။ အားကစားစင်တာများ၏ရှယ်အမ်ိဳးသမီးအသင်း လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ပင်နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးကြီးတစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအတွက်အကူအညီပေး။ ပြီးနောက်ကျန်ရှိသောအချက်များကိုချက်ချင်းဖြစ်လာ အမျိုးသမီးသုံးယောက်ရမှတ်:အောင်ပွဲ။ သင်းလူနေမှုအမျိုးသမီး-အသင်း ၊စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေ။ ေအာက္တိုဘာတပ်မတော်အားကစားစင္တာ ၊ဟွန်
ပြမြို့၏ဥေပညာ ။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဘယ်သူမျှမကတိကဝတ်ကိုဥေရာပပါ
චැට්, රැස්වීම, ප්රංශය සමඟ අමුත්තන් ආලය සඳහා ගැහැණු ළමුන් සහ පිරිමි ළමුන් .
ချက်တင်ကစားတဲ့အြန္လိုင္း ၁၀၀၀ ဆက်သွယ်ရေး ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများအခမဲ့အွန်လိုင်း ဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၁၈ ဗီဒီယိုချက်တင်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယို အခမဲ့ချိန်းတွေ့ ချက်တင်ကစားတဲ့မှအွန်လိုင်းသင်သည်သင်၏ဖုန်းအခမဲ့ အထီးကျန်သလိုတွေ့ဆုံရန် မပါဘဲဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း
© 2021 ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!